Ugcino lweeNkcukacha eziDityanisiweyo | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » Ukuhanjiswa kokuqukethwe
Isoftware-njengenkonzo yeqonga ixhasa ukusebenza kwedijithali kunye neenkqubo zokuhamba kwentengiso iVelocix, umboneleli ophambili wehlabathi wobuchwephesha bevidiyo ye-IP yokusasaza itekhnoloji, ityhile intengiso entsha yevidiyo yemveli kunye nenkonzo yokusasaza ubuqu eyenza ukuba kuhlawulwe abaqhubi beTV, abasasazi, kunye neenkonzo zokusasaza ezisekwe kwi-intanethi ukwenza ingeniso ephezulu kuyo yonke imijelo abayizisayo. Isisombululo esigcinwe ngokupheleleyo nesilawulwa sisoftware-njengenkonzo, ebizwa ngokuba yi-Cloud VPP, ...
URick Clarkson IGosa eliyiNtloko leQhinga, eliSigniant Kwishishini losasazo lwanamhlanje, ukuhambisa isixa esikhulu somxholo ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo phakathi kwamaqabane kubaluleke kakhulu. Ukutshintshiselana ngomxholo ozenzekelayo, ophakathi kwenkampani, phakathi kweenkampani zabo bonke ubungakanani kunye nejografi, kubaluleke kakhulu kwimveliso kwaye ngakumbi kusasazo lweefilimu eziguqukayo kunye ezahlukeneyo, iinkqubo zikamabonwakude, imidlalo yevidiyo, ii-asethi ze-OTT / VOD, kunye nezinto ezinxulumene nazo .. .
Kwabaninzi abanini bemixholo kunye nabasasazi, ukuhanjiswa kwe-OTT kuyancedisa kwaye kuthathe indawo yeendlela zokuhanjiswa kwemithombo yeendaba. Kodwa njengoko besungula amakhulu okanye amawaka amajelo, le mibutho iqinisekisa njani ukuba kumava akumgangatho ophezulu kubathengi? Bawenza njani umsebenzi omkhulu wokubeka esweni-ngaphandle kokubeka esichengeni ukubonwa kwempazamo yexesha lokwenyani? Abaqhubi banokukhetha ukubeka esweni ividiyo ...
I-ColUMBIA, Md. - Agasti 21, 2020 - LTN Global Global, inkokeli yomzi-mveliso kwitekhnoloji yokuguqula iindaba kunye nezisombululo zothutho lwevidiyo yayiliqabane elisebenzayo lemveliso kwiDemocratic National Convention (DNC), ebibanjelwe kule veki eMilwaukee, eWisconsin. Njengomlingani osemthethweni onxibelelanayo osemthethweni, izisombululo ze-LTN zazisetyenziselwa ukudibanisa abathathi-nxaxheba abatyeleli kumava evidiyo ashukumisayo. ...
INewTek iqinisekisa ukuzibophelela kwabathengisi ngeNkqubo entsha yeGlobal Global
Ngemfundo, inkonzo kunye noluhlu lwezibonelelo zeshaneli, inkqubo yenzelwe ukubeka amava omsebenzisi kuqala- INewTek, inkokheli kwitekhnoloji yevidiyo esekwe kwi-IP kunye nenxalenye yeQela leVizrt, namhlanje ibhengeze inkqubo entsha yejelo labathengisi kwihlabathi lonke. Umgca weNewTek weemveliso, ngakumbi iTriCaster®, i-3Play® kunye ne-NDI® esekwe kwikhamera kunye nemveliso yetekhnoloji yeekhowudi iya kuba ...